Lamba Cox Filter indrindra indrindra fikarohana sy mpanamboatra sivana lamba and sivana kitapo, vovoka sivana vokatra sy ny fiarovana ny tontolo iainana feno vokatra toy ny vovoka hetra harona sy ny fako fitsaboana.
Rehefa indostrialy iombonana vovoka vovoka manatona hakitroky iray eny amin'ny rivotra, toy ny lafarinina vovoka, indostrialy vovoka vovoka, vovoka arintany sns, dia mety hitarika mora foana ny afo na dia fipoahana raha misy voasakantsakan'ny-poana lelafo na kilalaon'afo. Tamin'izany sehatry ny kitapo vovoka fanangonana, raha mila sivana vovoka na fanangonana, ny haino aman-jery sivana ampiasaina amin'ny vovoka sivana kitapo tokony ho voasakantsakan'ny porofo.
Toy ny zavatra ilain'ny fipoahana fatana fandoroana, simenitra zavamaniry sy asa matihanina hafa ho an'ny arintany pulverized fanangonana, ny orinasa mpanamboatra sy vokatra manana antistatic sivana lamba sy ny any ampitan-dranomasina assimilating lamba amin'ny alalan'ny teknolojia.
Mba famokarana antistatic sivana sy ny sivana kitapo lamba mila ny fampifangaroana ny teknolojia manohitra ny voasakantsakan'ny fibre kofehy ny kofehy lamba fototra ampiasaina amin'ny fanamboarana totohondry nahatsapa lamba na fampifangaroana conductive fibre na fitaovana sahaza ho simika fibre. Afaka mamokatra roa karazana sivana antistatic lamba.
hateviny (mm) 1.8
Air permeability (m3 / m2 / min) 15
Breaking strength (N / 5×20cm) tenany ≥1000
Elongation (%) tenany ≤35
Constant hafanana (℃) 130
Instant hafanana (℃) 150
vita fitsaboana Singed, calendering,
ny diabe 24, 2013 at 7:17 am
rano & menaka porofo Fabric
Nylon Filter Bag - Nylon Filter Sock - Nylon Filter harato